Fanaan Dhallinyaradu Aad U Jeclayd Oo Gabi Ahaanba Fanka Isaga Baxay Kuna Dhawaaqay Inuu Dacwadda Diinta U Go’i Doono |
Makka (GNN):- Fannaanka Dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed Axmed Cabdikariim Maxamed oo loo yaqaano
(Axmed Biif) ayaa waxa uu sheegay in uu guud ahaanba ka baxay Fanka isla markaana uu Alle u toobbad keenay kana shaqayn doono inta noloshiisa ka gadhay dacwadda Islaamka sida uu kaga dhawaaqay mar uu shalay ku sugnaa Masjidka xaramka Barakaysan ee Makka Al Mukarama oo uu u joogo Cumro.
Axmed Cabdikariim Maxamed oo loo yaqaano (Axmed Biif) ayaa sheegay in uu sidaa kaga baxay Fankii uu muddoda ku soo jiray isaga oo bulshada Soomaaliyeed u sheegay in ay sidaa ugu soo duceeyaan oo uu faraha ka qaaday Fankii uu ku jiray muddoda.
Axmed Biif oo go’aankaan ku tilmaamay midkii ugu cuslaa nolashiisa, ayaa ummadda islaamka ka codsaday inay usoo duceeyaan. Waxaana uu sheegay in uu noqon doono Sheekh diinta Alle ka shaqeeya.
Fanaanka ayaa waxa uu sidaasi u sheegay isagoo ku sugan masaajidka barakeysan ee Xaramka waxaanu go’aankaasi u sheegay Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi (Barbaraawi) oo kamid ah culimada reer Somaliland iyo Barkhad Jaamac Batuun oo ah xoghayaha caddaalada xisbiga Waddani oo ay isku arkeen barxadda Masaajidka Xurmada Leh.